IFama yaseLarson kunye neCreamery - I-Airbnb
IFama yaseLarson kunye neCreamery
Ifama sinombuki zindwendwe onguCynthia And Richard
UCynthia And Richard yi-Superhost
Indlu yasefama yakhiwa ngeminyaka yoo-1930. Isanda kulungiswa, igcina umtsalane wayo wexesha. Kukho ikhitshi elikhulu elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa kunye nesitovu segesi, kunye namagumbi aphezulu, amagumbi okulala amathathu kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Kukho elinye igumbi lokulala elinendawo yokuhlala yabucala kunye nebhafu yabucala ekhoyo ngokucwangciswa. Kukho intlawulo eyongezelelweyo. Imigangatho yonke yinkuni emxinwa. Ukusuka kwiveranda enkulu ekhuselweyo ngasemva, unokusela ikofu yasekuseni kwaye ubukele ilanga liphuma phezu kwentaba.
Izinja kufuneka zigcinwe zifakwe intambo ngamaxesha onke ngaphandle kwefama, ukwenzela ukhuseleko lwazo, kunye nolo lwezilwanyana zethu. Iindwendwe zingasebenzisa i-oveni yepizza yangaphandle, ukuba imozulu iyavuma. Sibonelela ngeenkuni, imiyalelo, kunye noqeqesho oluthile.
Kwiindawo zokulala ezongezelelweyo, kukho ibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala, kunye ne-futon yemozulu entle kwiveranda ekhuselweyo. Amagumbi okulala amathathu awamakhulu, kodwa anendawo yokupakisha-n-play.
4.96 · Izimvo eziyi-199
IWells yidolophu encinci entle yaseVermont, kumantla eNtlambo yeMettawee. Iintaba ezilapha ziiTaconics zakudala, ezineempawu zomkhenkce ezinomdla. I-Wells inepaki yedolophu kunye nehlathi, kunye nendawo yepikiniki elunxwemeni, kunye nokuqaliswa kwesikhephe.
I-Wells Country Store, i-3/4 yeekhilomitha ukusuka kwifama yethu, yenza isidlo sakusasa esikhulu okanye i-sandwiches sasemini, iimuffins kunye nekofu.
Simalunga neekhilomitha ezi-6 ukuya kwindlela ebukekayo eya eLake St Catherine State Park, nolwandle lwayo oluhle.
Umbuki zindwendwe ngu- Cynthia And Richard
Organic farmer, real estate appraiser